चलचित्र निर्देशन : यस्तो छ वलीको जीवन–सङ्घर्ष – Ujyaalo Nepal
Ujyaalonepal - News From Nepal
चलचित्र निर्देशन : यस्तो छ वलीको जीवन–सङ्घर्ष
By Ujyaalo Nepal	 Last updated Jun 5, 2018 192
अमर वली चलचित्र चित्रमा नौलो नाम होइन । सानै उमेरदेखि यस क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै आएका व्यक्ति हुन् वली । २०३७ साल भाद्र ४ गते पिता भीम बहादुर र माता छलीकुमारी वलीको माइला सुपुत्रका रुपमा दाङ जिल्ला श्रीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ३ राजपुरमा जन्मिएका वली यतिबेला चलचित्र क्षेत्रमा व्यस्त निर्देशकको रुपमा चिनिन्छन् ।
‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेजस्तै वली सानै उमेरदेखि निर्देशक बन्ने धोको लिएर हिडेका थिए । उनी बाल्यकालमा पनि स्कुल पढ्दासमेत अन्य साथीहरुसित जिस्किँदै निर्देशकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्थे । गाउँमै विभिन्न कठिनाई र संघर्षका साथ एस.एल.सी उत्र्तीण गरेर काठमाडौँ हानिएका वलीले जिन्दगीमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हरेस कहिल्यै खाएनन् ।
२०५४ सालमा उनी नृत्य सिक्न भनेर बागबजारस्थित नेपाल आर्ट सेन्टरमा भर्ना भए । भर्ना भएको केही समयपछि वलीले नृत्यको कोर्ष सकेर सोही सेन्टरमा अभिनय पनि सिक्न थाले । उनले सुवास गजुरेल, दीपक त्रिपाठी उनका प्रशिक्षकहरुसँग अभिनय सिक्ने अवसर पनि जुटे । सोही क्रममा उनकै प्रशिक्षक सुवास गजुरेलले उनलाई टेली चलचित्रमा पहिलोपटक अभिनय गराए । निर्देशक अमर वलीसँग कलकारिता क्षेत्रमा देखिएको समस्या, चुनौती र आवश्यकताबारे उज्यालो नेपालका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीमा आधारित स्टोरी :
चलचित्रमा अम्बल अमर
निर्देशक अमर वली पछिल्लो चरणमा आएर चलचित्र क्षेत्रमा अम्बल बन्दै छन् । फिल्म क्षेत्रमा होमिएका उनले अहिलेसम्म जतिसुकै परिस्थितिमा संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । जिन्दगी नै संघर्ष सम्झिने वलीले केही गर्न केही गुमाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । संघर्षले नै सफलता मिलेको बताउने निर्देशक वलीले केही पाउन केही गुमाउनपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । उनी सफल निर्देशकको रुपमा चिनिन्छन् । धर्तीपुत्र, वे टु ईन्जुरी, आरोप, चोट र बे्रकअप जस्ता चलचित्र निर्देशन गरिसकेका छन् वलीले । निर्देशक वली भन्छन, ‘सिनेमा निर्देशन गर्नु कुनै सजिलो काम होइन, एउटा सफल निर्देशक बन्न ऊसँग धेरै कुराको ज्ञान हुन जरुरी छ ।’
फिल्म निर्माण गर्न ज्ञानको आवश्यकता
हरेक क्षेत्रमा जस्तै फिल्म क्षेत्रमा ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ । ज्ञान बिनाको फिल्म सोचेजस्तो हुन सक्दैन । उनी भन्छन, ‘क्यामरा, लाइट, गीत संगीत, कथा, सम्वाद, कस्तो कथालाई कस्तो लोकेसन चाहिन्छ, कुन सम्वाद फिल्ममा कहाँ गएर जोडिन्छ, कन्टिन्युटी के हो, डेस्रअप आदि ईत्यादिको ज्ञान हुन जरुरी छ ।’ अनि मात्र सिनेमा राम्रो बन्छ भन्ने वलीको बुझाइ छ ।
यसरी होमिए कलाकारितामा वली
चलचित्र निर्देशक अमर वली उनी सानैदेखि कलाकारितामा रुचि राख्दथे । संयोगवस उनी एक दिन दाइलाई भेट्न भनी काठमाडौं हनिए । २०५४ सालको कुरा हो दाइलाई भेट्न गएको वलीको मन बदलियो । पहिलोपटक काठमाडौंमा आइपुगेका वलीलाई सुरु सुरुमा काठमाडौँ शहर उकुसमुकुस नै लाग्थ्यो । दाइ र साथीभाइको संगतले उनलाई काठमाडौँको चक्करले घुमाउन थाल्यो ।
शहरका चोक र गल्ली गल्लीमा गीत संगीतको धुन बज्दा उनको कानमा गुन्जियो । अनि उनी नृत्य सिक्न भनेर बागबजारस्थित नेपाल आर्ट सेन्टरमा भर्ना भए । केही समय नृत्यको कोर्ष सकेर उनी सोही सेन्टरमा अभिनय पनि सिक्न थाले । सुवास गजुरेल, दीपक त्रिपाठी उनका प्रशिक्षकहरुसँग अभिनय सिके । उनकै प्रशिक्षक सुवास गजुरेलले उनलाई टेली चलचित्रमा पहिलोपटक अभिनय गराए बिस्तारै उनले अन्य टेलिचलचित्र, चलचित्र म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दै चलचित्रमा मुख्य सहायक निर्देशन पनि गर्न थाले ।
बिस्तारै बिस्तारै उनलाई धेरै म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्ने अफर आउन थाले । उनले थुप्रै भिडियो निर्देशन गरिसकेका छन् । जब म्युजिक भिडियोमा चक्कर चल्न थाल्यो, बदलिँदै वली साथीकै कारणले चलचित्रमा चक्रपथको चक्करभन्दा पनि घुम्न थाले वलीको संघर्षको चक्कर ।
म्युजिक भिडियोपछि चलचित्रमा निर्देशक
मान्छेको जीवनमा संघर्ष नै ठूलो कुरा हो । संघर्षले मान्छेलाई कहाँदेखि कहाँसम्म पु¥याउँछ भनेर सोचेको हुँदैन । जसले दुःख र कष्ट गर्न सक्छ, त्यसको नै सफलतको कथा बन्न सक्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा वलीलाई नचिन्ने कमै होलान् चलचित्र क्षेत्रमा । जब म्युजिक भिडियोतिर जमेका थिए, तब उनलाई लागिरहेको थियो अब चलचित्र निर्देशन गर्न पाए हुन्थ्यो ।
भन्छन्, ‘तँ आँट म पुर्याउछु भनेजस्तै भयो ।’ टोखामा उनले भिडियो निर्देशन गर्दै थिए जसमा नायक थिए प्रेम खड्का । उनी भन्छन, ‘बेलुका सुटिङ सकियो, खाना खाने बेलामा खड्काले भने, ‘एउटा चलचित्र निर्माण गर्नुपर्यो ।’ अनि त के चाहियो निर्देशक वलीलाई । उनले भने, ‘मसँग एउटा देश प्रेमले ओतप्रोत कथा छ चलचित्र बनाउने त ? प्रेम खड्काले पनि सहमति जनाए । त्यसको केही समयपछि चलचित्रको काम अघि बढ्यो । फलस्वरुप चलचित्र निर्माण भयो, चलचित्रको नाम जुर्यो धर्तीपुत्र ।
निर्देशक वलीको भाषामा धर्तीपुत्र नामजस्तै चलचित्रले कथा बोकेको थियो, जस्तै हाम्रो देशले सयौ वर्षदेखि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति, सीमा मिचिरहने देशमा दिनप्रतिदिन बेरोजगार बढ्नु यस्तै यस्तै यावत कथावस्तुलाई समेटेर चलचित्र निर्देशन गरेका वलीको चलचित्र सिनेमा घरमा आयो । दर्शकहरुले अत्यन्त रुचाएर चलचित्रले राम्रो व्यापार गरेकाले वली दंग थिए । सोही निर्माता तथा कलाकार प्रेम खड्का र सीता क्षेत्री मिलेर अर्को चलचित्र निर्माण गर्ने निर्णय गरे निर्देशक भने अमर वली नै थिए । उनको सीप र क्षमताका कराणले चलचित्रका निर्देशकले सबैले क्षमतावान निर्देशकको रुपमा मान्दछन् ।
संघर्षले चलचित्रमा अमरको चक्कर
अमर वलीले फेरि नयाँ काम गर्ने निर्णय गरे । नेपालमा पर्यटनलाई आर्कषण गर्ने तरीकाले चलचित्र निर्देशन गर्ने निर्णय गरे । अर्को चलचित्रको नाम जु-यो ‘वे टु इन्जुरी’ निर्माण भयो, जसमा निर्देशक अमर वलीले हाम्रै नेपालको भैरहवामा रहेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो चरा अस्ट्रिजसँग गेम खेलाए । पोखरामा प्याराग्लाईडिङ्ग, जिप फलाएर, फेवातालमा बोटिङ्ग, त्रिशुली नदीमा -याप्टिङ्ग, भोटेकोशीमा बन्जी जम्पजस्ता दृश्य फिल्ममा कैद गरे ।
उनी भन्छन्, ‘मैले यो चलचित्रमा ठूलो रिक्स लिएको छु । चलचित्र छायाङ्कन गर्दा अति गाह्रो भो । तर, पछि हामीले पर्दामा हेर्दा अति राम्रो लाग्यो । यसलाई हामीले विश्वसामू लैजाने उद्देश्य हो । हाम्रो देश नेपालमा पनि यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जसले पर्यटकलाई नेपाल आउन बाध्य बनाउँछ ।’ यो चलचित्र बाट पनि निर्देशक अमर वलीलाई सफलता हात प-र्यो ।
उनी भन्छन्, ‘म अली फरक सिनेमा निर्देशन गर्न रुचाउछु ।’ वलीमा यो सबै कुराको राम्रो ज्ञान छ त्यसैले उनले पहिलो चलचित्र निर्देशन गरेपछि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । उनी निरन्तर व्यस्त छन् । उनले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘आरोप’ पनि प्रदर्शनको तयारीमा छ । उनले पछिल्लो समयमा निर्देशन गरेको ‘आरोप’ यही भदौदेखि देशभरका हलमा प्रदर्शन हुँदैछ । यसका साथै धेरै संघ संस्थाहरुले उनलाई सम्मान पनि गरिसकेका छन् ।
क्षमताले सफल कलाकार
पहिलो कुरा, कलाकार बन्नलाई यसको ठूलो चुनौती र समस्या भनेकै आफूमा कलाकार देखाउने क्षमता छ कि छैन ? भन्ने हो । त्यसपछि धेरै त्यस्ता क्षमता भएका व्यक्तिहरु पनि अवसर नपाएर पछाडि सर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा जो मान्छे फिल्म निर्माण गर्छ, जोसँग पैसा छ, उनीहरु आफै कलाकार बन्ने दौडमा हुन्छन् । त्यसैले कला मात्रै लिएर आउने मान्छेसँग पैसा छैन भने यो चुनौती पार गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ । जहिलेसम्म कलाको महत्व बुझिँदैन, यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन् । क्षमता र धैर्य गर्ने मान्छे सफल कलाकार बन्छ ।
प्रस्तुति : शिखर चिमौरिया
नेपथ्यको ‘नासै छयाँबा’ म्यूजिक भिडियोमा
सत्यमोहन जोशी १०० औँ वर्षमा प्रवेशः यसरी गरियो सम्मान
नेपाल आईडल सिजन-२ का विक्रमले कसे अनुसँग लगनगाँठो (तस्वीरहरूसहित)
राजनीतिक सहमति भयो भन्दैमा भोलि नै रेलवे लाइन बनिहाल्छ भन्ने छैनः…
प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान, प्रहरीको गोली लागी एक…
‘असाधारण प्रतिभा’ भएकालाई यूएईमा ‘गोल्डेन भिषा’ कार्यक्रम
एउटा बावुले छोरालाई लेखेको चिठी
सूचना तथा प्रशारण विभाग, दर्ता नं. :- ०५–२०७३/०७४, युएन मिडिया नेटवर्कका लागि प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक - सूर्य खड्का, कार्यालय :– बानेश्वर-काठमाडौं, फोन :– 9841896857, E-Mail :- समाचारका लागि : news@ujyaalonepal.com, Ujyaalonepalnews@gmail.com,
विज्ञापनका लागि : Info@ujyaalonepal.com
© 2019 - Ujyaalo Nepal. All Rights Reserved.